EU sandara PRODUCT Steel PRICE ROUNDUP KUBVA MEPS - China Ningbo Ke Ming Machinery
EU sandara PRODUCT Steel PRICE ROUNDUP FROM MEPS
German hwaro tsika akamuka, muna August / September, nokuda yemararamiro uwandu zvinhu zvinowanikwa kubva vaburitsi dzokuEurope uye mhiri kwemakungwa. Maererano ichangobva pakadhindwa MEPS European Steel Review, wedzerai harisati kukunyimai, kunyanya nokuda Coated zvigadzirwa, pamwe pakukurukura kutungamirira nguva kuna kwegore uye kupfuura. Service centre mumatanda vari achidzikisa nokukurumidza sezvo vakawanda mugumo-vanoshandisa, uyo aizongova kuisa zvakananga bhizimisi chigayo, vari kutenga kubva Distributors kuti kuwana simbi nokukurumidza.
Italian basa nzvimbo dzinoshuma zvitengeswa tightness. Zvisinei, varikumahombekombe dzavo kuramba kusvinwa. Nokuti nguva, vatengi havadi kubhadhara zvakawanda. Kuparadzira kwemauto ane kugona rakawandisa uye vanoverengeka stockists vachiri kutengesa kwazvo rinopikisa.
MuUK, vazhinji ubvise chigayo chigadzirwa mitengo mberi, ichi mwedzi, sezvo vaburitsi Continental European ukazvikudza hwaro tsika kuti zvaizopedza simba, pondo hwakakwirira. Suppliers vava kutaura zvimwe vanomutswa. Distributors Most vari kushandisa chigayo kuwedzera, saka varikumahombekombe zvinogamuchirika. Mumatanda vakaderera nokuda zvitengeswa shortfalls. Tikacherechedza shoma Kuwanikwa kubva vatengesi.
Vatengi zveBelgium akataura kuti achapesana kuti dzakakwirira mitengo hazviratidzi chero zvakafanana kukura kudiwa, kunyange zvazvo basa centre rokutengesa vari nakei. Mill kuti mabhuku, nokuti vakawanda ubvise paguyo zvigadzirwa, izere kuna December, kana kunyange kupfuura. Zvakawanda mishoma chaizvo uye pane sokunonoka ari kare refu Delivery kutungamirira nguva. Distributors dzinoshuma kuti rokumusoro chigayo mitengo hazvigoni kushandiswa Resale netsika nguva dzose.
A vakanzwisisa kushaya Kuwanikwa kwakaita kuti dzakakwirira hwaro nhamba muSpain. Service nzvimbo dziri kunetseka kuti vatengi vavo vachava chete aoma kubvuma chigayo vanomutswa. Vamwe vatengi kutarisira kuti romugove nyaya anogona kugadziriswa kuburikidza wokutanga kota 2017. Kwete muduku, nekuti competitively-akatemerwa mutengo kupinzwa vari pa kubva dzinoverengeka rechitatu nyika manyuko, kwete kukanganiswa antidumping zviyero.
Post nguva: Aug-13-2018